Sida Loo Kordhiyo Darajaynta Raadinta Adoo Raadinaya, Kormeeraya, iyo Toosiinta 404 Khaladaadka Kujira WordPress | Martech Zone
Arbacada, February 24, 2021 Khamiis, Maarso 24, 2022 Douglas Karr
Waxaan ka caawinaynaa macmiil shirkadeed hada hirgelinta degel cusub oo WordPress ah. Waxay yihiin meelo badan, luuqad badan ganacsi oo ay leeyihiin natiijooyin liita oo la xiriira raadinta sanadihii la soo dhaafay. Markii aan qorsheyneynay boggooda cusub, waxaan ogaanay arrimo dhowr ah:
Archives - waxay lahaayeen dhowr goobood tobankii sano ee la soo dhaafay oo leh farqi muuqda oo ku saabsan qaab dhismeedka URL-ka boggooda. Markii aan tijaabinay xiriiriyeyaasha bogagga hore, waxay ahaayeen 404'd boggoodii ugu dambeeyay.
Backlinks - markaan sameynay xisaab celin dhab ah adoo adeegsanaya Xeebaha,
Translation - inbadan oo ka mid ah dhagaystayaashoodu waa Hisbaanik, laakiin boggooda waxay ku tiirsan yihiin oo keliya badhanka tarjumida halkii ay ku dari lahaayeen, bogag gacantooda lagu turjumay.
Goobtooda ugu dambeysay waxay ahayd leedahay wakaalada SEO waxay ushaqeynayeen… feker ahaanteyda waa dhaqan aad uxun oo asal ahaan afduubaya milkiilaha ganacsiga. Marka, horay u socoshada waxaan ku qasbanaan laheyn inaan gebi ahaanba ka abuurno goob cusub xoqitaanka isla markaana aan u hagaajino… qarash weyn oo ku baxaya macmiilka.
Qeyb muhiim ah oo ka mid ah istiraatiijiyadda cusub ayaa ah in laga faa'iideysto saddexdaas arrimood ee kor ku xusan. Waxaan u baahanahay inaan hubinno inaan ku darno dib u habeyn dhammaan bogagga maqan (3 qalad) WAANna ka faa iideysan karnaa adeegsadayaashooda luqadaha badan ee raadinta adoo ku daraya bogag tarjuman. Qodobkaan, waxaan diirada saarayaa 404 arin qalad - maxaa yeelay waxay dhaawaceysaa qiimeynta mashiinkooda raadinta.
Maxay tahay sababta 404 khaladaad ugu xunyihiin qiimeynta SEO
Si loo fududeeyo sharraxaadda macaamiisha iyo ganacsiyada, had iyo jeer waxaan ogeysiiyaa in makiinadaha wax lagu raadiyo index bog oo ku toosso ereyada muhiimka ah ee gaarka ah ee ku jira boggaas. Si kastaba ha noqotee, iyagu darajo bog ku saleysan caannimadiisa - sida caadiga ah loo turjumay dib-u-xiriiriyeyaasha bogagga kale.
Markaa… ka fikir inaad bog ku leedahay boggaaga sannado ka hor oo si fiican u taxan kuna xiran ilo kala duwan. Markaa waxaad dhiseysaa degel cusub oo boggaas ka baxayo. Natiijadu waxay tahay in markii matoorada raadinta ay gurguurtaan gadaasha dambe… ama isticmaale ku sugan goob kale uu dhagsiiyo xiriiriyaha… waxaa ka soo baxa qalad 404 ah oo ku saabsan bartaada.
Xaashida Taasi waa u xun tahay waayo-aragnimada isticmaalaha iyo waxay u xun tahay waayo-aragnimada isticmaaleyaasha mashiinka raadinta. Natiijo ahaan, mashiinka raadinta ayaa iska indha tiraya backlink… kaas oo ugu dambeyntii hoos u dhigaya awoodda iyo darajada bartaada.
Warka fiicani waxa weeye in backlinks-ka ku yaal degel sharciyeysan runti uusan dhicin! Maaddaama aan u dhisnay bogag cusub macaamiisha isla markaana aan si habboon ugu wareejinnay xiriiriyeyaal duug ah waxyaabaha cusub… waxaan daawannay bogaggan oo cirka isku shareeraya xagga sare ee bogagga natiijada mashiinka raadinta (SERP).
Haddii aad heysato hay'ad diiradda saareysa taraafikadaada raadinta dabiiciga ah (iyo WALBA websaydh wakaalad naqshadeyn ah waa inay ahaataa) ama haddii aad leedahay la-taliye SEO ah oo AANAN qaban shaqadan, waxaan aaminsanahay inay runti dayaceen shaqadooda. Mashiinnada raadintu waxay sii wadaan inay noqdaan isha ugu sarreysa ee taraafikada rajooyinka la xiriira iyadoo ujeedadu tahay wax iibsasho.
Marka, taas… haddii aad dib u naqshadaynayso bartaada, hubi inaad xisaab hubin iyo dib ugu wareejinta taraafikadaada bogagga cusub si habboon. Iyo, haddii aadan dib u qaabeyneyn goobtaada, waa inaad wali kormeertaa 404 bogag oo aad si sax ah ugu wareejisaa!
FIIRO GAAR AH: Haddii aadan u guurin bog cusub, waxaad si toos ah ugu boodi kartaa Tallaabada 5 ee geeddi-socodkan si aad si fudud ugula socoto oo aad u weeciso 404 bog.
Tallaabo 1: Hubinta Hordhaca ah ee Barta Hadda Jirta
Soo Degso Dhamaan Hantida Hada Jirta - Waxaan tan ku sameeyaa barnaamij weyn oo OSX ah oo la yiraahdo BoggaSucker.
Hel Liiska Dhammaan URL-yada hadda jira - Waxaan tan ku sameeyaa Qaylinaya Rooggu.
Hel Liiska Dhammaan Xirmooyinka Dib-u-Xiriira - adoo adeegsanaya Xeebaha.
Hadda, waxaan hayaa hanti kasta iyo bog kasta oo ku yaal barta ay hadda ku shaqeeyaan. Tani waxay awood ii siineysaa inaan si sax ah khariidadeeyo mid kasta oo ka mid ah kheyraadkaas jidadka cusub ee goobta cusub (haddii ay u baahan yihiin dib u wareejin).
Tallaabo 2: Qorshaha Hore-U-Bilowga Nidaamyada Kala Duwan, Isugeynta, iyo Bogagga
Talaabada xigta waa in la hubiyo waxyaabaha ay ka kooban yihiin lana ogaado sida aan u fududeyn karno una dhisi karno a maktabadda taasi waa mid si wanaagsan loo qaabeeyey loona abaabulay barta cusub. Waqtiga intiisa badan, waxaan ku dhisaa bogagga faaruqa ah tusaale ahaan barnaamijka WordPress si aan u helo liis hubin ah oo lagu dhammaystirayo goor dambe qorayaasha iyo naqshadeeyayaashayda inay ku shaqeeyaan.
Waan dib u eegi karaa URL-yadii hore iyo hantida hadda jirta si aan dib ugu soo nooleeyo bogagga qabyada ah si ay ugu fududaato in la hubiyo inaan haysto dhammaan waxyaabaha lagama maarmaanka u ah waxna aan ka maqnayn goobta cusub ee ku jirtay boggii hore.
Tilaabada 3: Khariidadeynta horay uqaadida URL-yadii hore ee URL-yada cusub
Haddii aan fududeyn karno qaabdhismeedka URL-ka oo aan isku dayno inaan ka dhigno bogga oo aan dhejinno slugs gaaban oo fudud, waan sameynaa. Waxaan ogaaday sanadihii la soo dhaafay in halka dib u habeynta loo maleynayo inay luminayso xoogaa awood ah… wax u qabashada iyaga ayaa kicin kara hawlgelinta, taas oo u tarjumeysa darajo wanaagsan. Mar dambe kama baqi doono u wareeji bog darajo sare leh URL cusub markay macno samaynayso. Tan ku samee xaashiyaha macluumaadka!
Tallaabada 4: Dib-u-habeynta Wareejinta Soo-dejinta
Aniga oo adeegsanaya warqad-xisaabeed ku jirta Tallaabada 3, waxaan ku abuurayaa shax fudud oo ah URL-ka jira (bilaa domain) iyo URL-ka cusub (oo leh domain). Waxaan ku soo dejiyaa dib u habeynta ku jirta Xisaabta Xisaabta SEO Plugin ka hor inta aan la furin barta cusub. Xisaabta Darajada ayaa ah ugu fiican WordPress plugin SEO, feker ahaanteyda. Xusuus-qor… Nidaamkan waa (waana in la sameeyaa) xitaa waa la qaban karaa haddaad tahay u guuritaanka barta degmo cusub.
Tallaabada 5: Daahfurka oo Kormeer 404s
Haddii aad sameysay dhammaan tallaabooyinka illaa iyo hadda, waxaad leedahay bogga cusub, dhammaan dib u habeynta, dhammaan waxyaabaha ku jira, waxaadna diyaar u tahay inaad bilowdo. Shaqadaadu wali ma dhamaan… waa inaad kormeer ku sameysaa barta cusub si aad u ogaatid 404 bog oo isticmaalaya laba qalab oo kala duwan:
Raadinta Raadinta Google - isla marka goobta cusub la furo, waxaad u baahan doontaa inaad soo gudbiso khariidadda bogga ee 'XML' oo aad dib u hubiso maalin ama si aad u aragto haddii ay jiraan wax arrimo ah oo ku saabsan bogga cusub.
Darajada Xisaabta SEO Plugin ee 404 Monitor - Kani waa aalad aad u baahan tahay inaad inta badan isticmaasho… ma aha oo keliya markaad bog furaysid. Waxaad u baahan doontaa inaad ku awoodsiiso Dashboardka Xisaabta Darajada.
Tusaale ahaan, waxaan bilownay goob loogu talagalay meelo badan Dhakhtarka ilkaha ee ku takhasusay caruurta leh caymiska Medicaid. Mid ka mid ah bogagga aan aqoonsannay ee leh gadaal gadaal-gadaal aan la daboolin wuxuu ahaa maqaal, Ilkaha Ilmaha 101. Boggii hore ma lahayn maqaalka. Mashiinka 'Wayback' wuxuu kaliya lahaa qayb kooban. Marka markii aan bilawnay bogga cusub, waxaan hubinay inaan haysanno maqaal dhammaystiran, infographic, iyo sawirro bulsheed leh jihooyin laga soo diray URL-kii hore illaa kan cusub.
Isla markii aan bilownay goobta, waxaan aragnay in gawaarida gawaarida ay hadda u socdaan bogga cusub ee ka socda URL-yadii hore! Boggu wuxuu bilaabay inuu soo qaado qaar ka mid ah taraafikada wanaagsan iyo darajada sidoo kale. Ma aanan dhammeyn, in kastoo.
Markii aan baarnay 404 Monitor, waxaan helnay dhowr URL oo leh "ilkaha carruurta" oo ku degaya 404 bog. Waxaan ku darnay waddooyinka saxda ah ee saxda ah ee loo rogo bogga cusub. Xusuus-qor Side waxaan u isticmaali karnaa a muujinta joogtada ah si aan u soo qabanno dhammaan URL-yada laakiin waxaan taxaddar ku jirnaa inaan bilowno.
Shaashadda kore ayaa dhab ahaan ah Xisaabta Xisaabta Pro oo ay ku jirto awoodda lagu kala soocayo wareejintaada… muuqaal aad u fiican. Waxaan sidoo kale la tagnay Rank Math Pro maxaa yeelay waxay taageertaa qorshooyinka meelo badan.
Hadda, boggu waa boggooda # 8 ee ugu badan looga ganacsado barta cusub toddobaad gudihiis markii la bilaabay. Oo waxaa jiray 404 bog halkaas dhowr sano markasta oo qof yimaado! Waxay ahayd fursad aad u weyn oo la seegay oo aan la helin haddii aan ka taxaddarin sida saxda ah u wareejinta iyo kormeerka xiriiriyadii hore ee ka jiray webka ee boggooda.
Xisaabta Xisaabta sidoo kale waxay leedahay maqaal aad u faahfaahsan oo ku saabsan hagaajinta khaladaadka 404 oo aan kugu dhiirigelin lahaa inaad aqriso.
Xisaabta Heerka: Sida loo Xaliyo Khaladaadka 404
Tags: 404Qalad 404baadhitaangurguurto goobtaraadinta google googlekeen dib u hagidaurl mapdarajo dabiici ahdarajo xisaab xisaabeeddarajo xisaabdarajo xisaabta seo plugindarajeeyowareejinrah qaylinayaraadinta darajadasemrushSEOqiimeynta seoserpdhuuqida goobtasiteuckerWordPress
Suuqgeynta Warbaahinta Bulshada 101